ခရီးထွက်တဲ့အခါ အပြည့်အဝ အနားရစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု
ရှုခင်းတွေမကြည့်ဘဲ ဖုန်းကိုပွတ်နေရင် အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။
လုပ်လက်စအလုပ်တွေပစ်ထားပြီး အနားယူတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင် အခုပြောမယ့်အချက်တွေကို အရင်ဆုံးဖတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေက အားလပ်ရက် အနားယူချိန်တွေကို အကျိုးမဲ့ကုန်ဆုံးစေလိုက်ရင်း တကယ်အနားမရဘဲ ပိုပင်ပန်းသွားကြလို့ပါပဲ။ တကယ်ကို စိတ်အေးလက်အေး အနားရဖို့ဆိုရင် အနားယူချိန်မှာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို လိုက်နာမှ အနားရမှာပါနော်။
နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပင်ပန်းနွမ်းနေစေပါတယ်။ ဘဝရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်နေရင်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပိုဖြစ်စေတဲ့ adrenaline နဲ့ cortisol ဟော်မုန်းတွေလည်း ထွက်လာရတယ်။ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့သွားအောင် အကြောဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပါ။
လူမှုကွန်ရက်တွေဆိုတာ နေ့တိုင်းလည်း သုံးဖြစ်နေတာပဲ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးနဲ့ တစ်ရက်ဝေးလို့ ဘာမှနစ်နာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင် အီးမေးလ်ပို့ဖို့ မှာထားခဲ့ပါ။ ခရီးထွက်တယ်ဆိုပြီး ရှုခင်းတွေမကြည့်ဘဲ ဖုန်းကိုပွတ်နေရင် အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။
သွားရမယ့်ခရီးမှာ ပျော်စရာတွေ ဘာရှိမလဲ? ဘယ်လိုတွေလုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုရအောင်နေမလဲ? ဈေးပတ်မယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးမယ်၊ လှေလှော်မယ် စသဖြင့် လုပ်ချင်တာတွေကို စာရင်းလုပ်ထားပြီး အကုန်လုံး လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။
ရှုခင်းနဲ့ နယ်မြေဒေသရဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားဖို့ဆိုရင် လမ်းလျှောက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ကိုယ် တည်းတဲ့နေရာရဲ့ အနီးအနားနဲ့ သွားလာလို့ရသလောက်ကို လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။ လေကောင်းလေသန့်လေးရှုရင်း လမ်းလျှောက်တာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းသလို အာရုံစုစည်းမှုလည်းကောင်းတယ်။
စာရေးရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် ခရီးထွက်တဲ့အခါ စာရေးကြည့်ပါ။ အသစ်တွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာ တစ်ခုခုကို လုပ်ကြည့်မယ်ဆို အာရုံက လန်းဆန်းနေတော့ ပိုကောင်းတဲ့အသစ်တွေကို ရလာနိုင်ပါတယ်။